8 Mifananidzo Pfungwa yekutengesa Bhizinesi rako pa Instagram | Martech Zone
Mugovera, Gunyana 5, 2015 Mugovera, January 2, 2021 Douglas Karr
Nguva imwe neimwe imwe nguva, ndinouya nekodhi yakanaka kana chidimbu chezano randinoda kugovana nevamwe. Panzvimbo pekungozvitumira kunze, ini ndinovhura iyo Depositphotos mobile application uye uwane mufananidzo wakanaka. Ndinozvirima ndichishandisa iPhone yangu ndobva ndavhura mu Pamusoro peApp. Mukati memaminetsi gumi, ini ndinemufananidzo wakanaka unogona kukurudzira mamwe yedu yekambani Instagram network. Heino muenzaniso:
Chii icho chine chekuita nekugadzira kutengesa kwekambani yangu? Ndakawana pamusoro pemakore apfuura iyo mikana mikurusa uye vatengi vakauya kuburikidza nemambure edu, kwete nekusimudzira kupenga kubva mairi.
Instagram inoonekwa pasocial network iyo inopa nzira yakanakisa yekuvhura yangu hupenyu hwega uye kuigovana online. Ini ndinoisa marudzi ese emifananidzo kumusoro - kubva kuhofisi yedu kuenda kune vatengi vedu, kune imbwa yangu… uye hongu… mamwe manyorerwo akataurwa mukati. Hatina vateveri vakakura, asi isu tine boka rakakura reshamwari dzinofarira uye dzinogovana zvatinoburitsa.
neHootsuite, isu tinogona zvakare kuronga yedu Instagram zvinyorwa kune vateereri vedu! Kuronga magadziriso e Instagram ave achinyanya kushanda pakuronga kushambadzira kwevatengi vedu.
Maitiro Ekushambadzira Rako Bhizinesi pa Instagram
Muti Wemagariro isa pamwechete iyi infographic yakajeka kuti ikubatsire kufunga nezve mazano ezvemifananidzo uye vhidhiyo iwe yaunogona kugovana kuti ikure kuzivikanwa kwechako chako uye kuvaka hukama munharaunda nevateereri vako. Ivo vanopa masere emifananidzo mazano aunogona kutora mukana kushambadzira bhizinesi rako pa Instagram:
Ratidza zvigadzirwa zvako (kana ako vatengi!)
Ratidza kuti zvigadzirwa zvako zvinogadzirwa sei kana masevhisi ako anopihwa.
Enda kuseri kwezviitiko
Ratidza izvo zvigadzirwa zvako kana masevhisi anogona kuita
Ratidza kuhofisi yako nevashandi
Goverana zviitiko zvauri kuenda
Goverana makotesheni uye kurudziro
Shandisa makwikwi kuti uwane vateveri vatsva
Ehezve, pasi pemugwagwa unogona kunyange kutyaira kumwe kushandurwa uchishandisa Bhatani reKutenga re Instagram!
Kuzivisa: Ndiri kushandisa zvakabatana zvinongedzo muchinyorwa chino.
Tags: mifananidzo yemifananidzokufemerwaInstagraminstagram marketinginstagram mavhidhiyo